INorthstar Haven ngaphesheya kweDetroit Lake - I-Airbnb
INorthstar Haven ngaphesheya kweDetroit Lake
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAnne
INorthstar Haven yindawo erentisayo ngeeholide ebekwe eDetroit Lakes, ngaphesheya kweBig Detroit Lake. Yindawo egqibeleleyo yokufumana iholide yosapho okanye indibano yabahlobo abasondeleyo. Abantwana baya kuba nokudlala ngokudlala kwiyadi enkulu okanye kwiilwandle ezikufutshane kwi-Big Detroit Lake. Umgodi omkhulu womlilo ulungele imililo yangokuhlwa. Kwiinyanga zasebusika, yiza nekhephu elihambayo kwaye ukonwabele ukufikelela lula kwechibi labucala eDetroit Lake. INorthstar Haven yeyona ndawo ifanelekileyo yeholide kuwo onke amaxesha onyaka.
INorthstar Haven ihonjiswe ngenjongo kwaye ixhotyiselwe abakhenkethi abahamba kwindawo yaseDetroit Lakes. Kukho amagumbi okulala amathathu kunye negumbi lokuhlambela elinye phezulu. Umgangatho ongezantsi ufanelekile kubantwana abanendawo eninzi yokudlala, ibhedi yosuku enebhedi ye-trundle yamawele ama-2, oomatrasi bomoya aba-2 kunye nesofa. Igumbi lokuhlambela lesibini eligcweleyo likwinqanaba elisezantsi kunye newasha kunye nesomisi. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into oyifunayo xa utyela isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa--kubandakanya ikofu iKeurig yekofu yakho yasekuseni kunye nesivuli sewayini saloo glasi yewayini njengoko ujonge ukutshona kwelanga kwidesika enkulu yangaphandle. Izibonelelo ze-S'mores kunye neetawuli zaselwandle nazo zibonelelwe ukukwenzela lula. Umgodi womlilo ngaphandle ulungile kwi-S'mores emva kosuku olude echibini. Kwiinyanga zasebusika kukho ukufikelela echibini kwiLake laseDetroit kwiinqwelomoya zekhephu okanye ukuloba komkhenkce.
IDetroit Lakes yindawo entle yokuchithela iiholide phakathi kwamachibi amaninzi acwengileyo. Iyure enye ukusuka eFargo kunye neeyure ze-3 ukusuka kwiiTwin Cities. Le AirBnB ibekwe ngqo ngaphaya kwesitrato ukusuka eBig Detroit Lake kunye neFireside Restaurant. Ungaqesha izikhephe kunye ne-jet skis kwi-J&K Marina kwi-Big DL kwaye ukhwele isikhephe ukuya kwiindawo ezincinci echibini njengeLong Bridge, Zorbas, Hub 41 nangaphezulu. Nceda ubuze malunga needokhi ezikufutshane kunye neelwandle.
Ndiza kufumaneka ngefowuni okanye nge-imeyile ngayo nayiphi na into oyifunayo. Andisoloko ndisedolophini, kodwa ndinosapho, abahlobo, abantu endisebenza nabo abacocayo, amadoda asebenzayo kunye nabasebenzi abanokuncedisa kwiimfuno ezingxamisekileyo.
Ndiza kufumaneka ngefowuni okanye nge-imeyile ngayo nayiphi na into oyifunayo. Andisoloko ndisedolophini, kodwa ndinosapho, abahlobo, abantu endisebenza nabo abacocayo, amadoda ase…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$1500